Uphendulela ngaphandle, uMboniso bhanyabhanya 'Khangela okungaBhalwanga' Ngokwenyani ubethunyelwe kakhulu kwaye uyothusa | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Kuya kuvela ukuba iMovie, 'Khangela okungaBhalwanga' yayiNene kakhulu kwaye ityhafile
Kuya kuvela ukuba iMovie, 'Khangela okungaBhalwanga' yayiNene kakhulu kwaye ityhafile
Umboniso bhanyabhanya ongaqhelekanga.Disney
Ngaba uyayikhumbula imovie Khangela okungenanto? Ndinayo kwi-VHS kwaye yeza ngeplastikhi ye-VHS emhlophe kwaye ndayibukela ngendlela amaxesha amaninzi. Ukuba awukhumbuli, uxelele ibali likaPreston Waters, umntwana oneminyaka eli-12 ofumana ibhayisekile yakhe ibalekiswa ngumgwebi obalekileyo kunye nomshushumbisi wemali oshiya itsheki engenanto ukuze ahlawule umonakalo, ogcwaliswa nguPreston Isigidi esinye seedola. Ngenxa yothotho lwe-hijinks, u-Preston ufumana isigidi seedola ezinkozo kwaye emva koko uyichitha kwinqaba nakwisilayidi samanzi ade afunde isifundo esibalulekileyo malunga nosapho, ndiyaqikelela. Khangela okungenanto yabhalwa nguBlake Snyder ngubani incwadi wayibhala ngokoqobo ekubhaleni isikrini , ke ucinga ukuba iya kuba yimovie engcono, kodwa ayisiyiyo. Yiyo ngokupheleleyo kwaye ngokupheleleyo iibhanana kwaye nkqu i-90's ayisosizathu saneleyo sokuba le movie yenziwe njani. (Ukonwaba: umlawuli wefilimu, uRupert Wainwright kubonakala ngathi ivuliwe Usozimali Umlingisi Ngo-2010 yeyiphi ebuhlungu, kodwa kulungile kuye?)
Ngapha koko, Khangela okungenanto ikwiNetflix kwaye ndiyibukele ukuze ungafuneki.
Ke imovie ivula ngendoda ebaleka ejele. Akukhange iphinde ikhankanywe ukuba ubalekile ejele.
Akukho mntu umfunayo. Amapolisa awekho kumkhondo wakhe. Akukho namnye owakha wavuma ukuba le ndoda ifanele ukuba isentolongweni.
Ubalekile ke umgwetywa kwaye ufumana isigidi seedola ezinkozo ukuze ashiye i-welding phantsi kweebhodi zomgangatho wesakhiwo esishiyiweyo.
Apho ushiya khona imali, kunjalo.
Ngethamsanqa naye wazishiya izixhobo zakhe zokuwelda kufutshane.
Ke sidibana noPreston Waters, lo mntwana we-esile onxibe ihempe kunye ne-khaki kumnyhadala wokuzalwa kwipaki yolonwabo:
Umntwana ondorky uyamthiya ogama lingu-Alan.
Eli ligorha lethu.
Ubomi bukaPreston bunzima kuba unabantakwabo abadala abancinci abavunyelweyo ukuhambisa yonke inkunkuma egumbini lakhe, kwaye bebe nolondolozo lobomi bakhe kungabikho ziphumo.
phi ukuthenga vapes online
Baneshishini elincinci elibizwa ngokuba yi-Hand and Foot Incorporate yiyo loo nto utata wabo ebavumela ukuba babe ngabaxhaphazi, kuba unebhongo kakhulu ngabo ngokuba neshishini elincinci.
U-Preston ulusizi kuba elihlwempu (njengoninzi lwabantwana abaneminyaka eli-12) kwaye utata wakhe wamnika i-6 yedola kuphela ukuba aye epakini enomxholo kunye nabahlobo bakhe engenamali yaneleyo yokuhamba nakwezinye izinto akhwela kuzo, eyi-jerk entle shukumisela utata wakhe.
Luhlobo luni lwepaki yomxholo le?Disney
Ngaba utata wakhe akazi ukuba ipaki yemixholo edolophini yabo isebenza njani? Ngaba Preston ngenene wayengamazisi? Kwakhona, baphi abazali bomntwana ngeli theko lomhla wokuzalwa? Ndiyathanda ukucinga ukuba baqaphele Nye Umntwana ohluphekileyo owayengenakukwazi ukuya nakuphi na ukukhwela ngewayemncedile. Lo ngumthetho ongenamthetho, owoyikekayo.
Ke isigwebo esibalekileyo singena ebhankini kwaye sisongele umnini webhanki ngokumnyanzela ukuba amenzele imali ukuze amapolisa angabinakho ukuyilanda. Endaweni yokubiza amapolisa kwesi sigwebo sibalekileyo, uyavuma ukunika izigidi zeedola ezinkozo kuye nabani na ongena eofisini yakhe ngo-1 emva kwemini.
Lo mfo kwakhona.Disney
Kwaye ngothotho lwee-hijinks, loo mntu nguPreston Waters.
Lo mntu uxela ibhanki ubona umntwana omncinci esiza ngetsheki kwisigidi seedola esenziwe ukuba semali kwaye simzise kumnini webhanki, kuba oko kubonakala kuyinto efanelekileyo ukuchitha ixesha lakhe.
Kwakhona, ngenxa ye-hijinks, u-Preston ufumana imali, kwi-10 kubonakala ngathi, kwaye uyifaka kubhaka wakhe.
Iziphumo ebezingalindelekanga kwimithambo yegazi
Isigidi seedola ezinkozo asinakulunga kubhaka womntwana. Ngokwenyani, yigoogle. Kwaye ngakumbi hayi xa iibhili zikwi-10. Kodwa nantoni na. Eli lihlabathi lenkunkuma apho i-physics ayisebenzisi.
Eligwetyiweyo libalekileyo, uMnu. Quigley, uzama ukuthenga enye yezo nqaba zommelwane nge $ 150,000 ekuthi nango-1994 akufuneki ibeyimali eyiyo.
Emva koko u-Preston ubiza kwaye unikezela ngemali engaphezulu usebenzisa ilizwi elizenzekelayo kwikhompyuter yakhe ye-Macintosh evakala ngathi iyothusa i-AF.
Abantu abathengisa indlu abayikhathalele nokuba i-100% ivakala ngathi yifowuni ye-prank. Abalisebenzisi ityala lakhe okanye babuze igama lakhe.
U-Preston uneminyaka eli-12 ubudala owaziyo ukuba zeziphi iindleko zokuvala.
Ndiyamcaphukela lo mntwana.Disney
Ke emva kokuba ehlawule inqaba enkulu, u-Preston uyahamba kwaye ndineminyaka eli-12 ubudala kunye nezigidi zeedola kumnandi kunye nomqhubi amqeshileyo, uHenry, ongabuzi kwaphela ukuba kutheni lomntwana enemali engaka kwaye ixesha lamahala.
Njenge-goddam weirdo, uHenry uyaxhoma kwaye wonwabe nalo mntwana wenza ubuhlobo.
U-Preston wenza ngathi imali ivela kumfo osisityebi ogama lingu Mnu. Macintosh ovumela nje ukuba ayichithe, no-Henry kancinci Imibuzo ngayo.
Elona xesha kuphela alibuza ngalo.Disney
U-Preston unje, ewe kwaye kukuphela kwayo.
U-Preston uqhuba kwi-limo yakhe xa ebona lo mntu utshisayo ebhankini ebaleka ecaleni kwendlela ngoko ke wagqiba kwelokuba amngenise.
Lo mfazi ukhulileyo ngumdla wothando kumdlalo bhanyabhanya.
adam sandler kunye noJennifer aniston movie 2019
Uza ngasendlini kamva kwaye uyavuma ukuphuma nalo mntwana.
Njengomhla wokutyelwa okumnandi.
Ukunxiba loo lokhwe.
YINTONI I-Fuck, LADY.Disney
Okwangoku, u-Preston uxelele abazali bakhe ukuba ubutyebi bakhe obutsha asikuko kukuba usebenzela umfana ogama lingu Mnu. Macintosh, kwaye abazali bakhe ababuzi ukuba kutheni le ndawo isisityebi iqeshe umntwana kwaye yamhlawula ngekheshi.
Yintoni engalunganga ngawe.Disney
Kutheni le nto abazali becinga ukuba oku kulungile? Bacinga ntoni umsebenzi kaPreston? Ukuba uMnu Macintosh wayenyani, u-Preston wayeza kuba ne-100% yokuxhatshazwa.
Ke ulwaphulo-mthetho lumlandela phantsi uPreston kwaye lumleqa emotweni ngelixa ekhwaza ezinye izinto ezihlekisayo.
Ngaba yinto ethethwa ngabantu?Disney
Kutheni usitsho emntwaneni?
Kodwa u-Preston ubaleka kwaye uthatha isigqibo sokuphosa itheko lakhe lokuzalwa elikhulu, apho aqonda ukuba uphelelwe yimali. Sele kuziintsuku ezintandathu.
Kutheni wonke umntu ethe phithi bubhuti wakhe.Disney
Umcwangcisi weqela ufuna yonke imali yakhe ethekweni, engabonakali njengeprothokholi esemgangathweni, kwaye xa esithi akanayo, uya kwinqanaba kwaye uthi:
Yeyiphi, kwakhona, engabonakali njengeprothokholi esemgangathweni ethekweni xa umcwangcisi wepati engekahlawulwa okwangoku.
Ke ipati iyavalwa kwaye abantu bavele bahluthe izipho zabo, ngokungathi yinto yabantu.
Kwaye utata kaPreston naye weza ethekweni kunye nee-monologs ku-Preston kwisitulo esijonge ngasemva kuba ucinga ukuba nguMnu Macintosh, usozigidi ongazange adibane naye oqeshe umntwana wakhe.
Kwaye ke izaphuli-mthetho ziyavela kwaye uPreston ugcwele Ekhaya ndodwa phezu kwabo nangona wayenexesha elingu-zero lokulungisa le migibe.
Kodwa ngethamsanqa, i-FBI ibonakalisa kuba uMnu.Macintosh oyintsomi okhe wabakho engqondweni yomntwana ixesha elingaphantsi kweveki uphantsi kophando ngobuqhetseba, ndiyaqikelela.
ziphuma nini iimfazwe ezintsha zeemfazwe zamuvi
Awayamkeli into yokuba uMnumzana uQuigley lityala elisindileyo, okanye umnini-bhanki ebesebenzisa imali ngokungekho semthethweni. Hayi, konke oku kuluma kwenzelwa uMnu Macintosh.
Ngaphandle kokuba bengazi ukuba ngubani uMacintosh, kuba xa uQuigley ebanga ukuba unguye (kwakhona, ngenxa ye-hijinks), i-FBI ifana nayo, ngokuqinisekileyo, mhlawumbi, kwaye iyambamba, njengo Mnu. Macintosh, hayi njengo Quigley umgwebi obalekileyo .
Oku kubonakala ngathi ngumgaqo-nkqubo we-FBI oqhelekileyo.Disney
Ewe, kwaye uShay wayengummeli we-FBI ngalo lonke elixesha, obesebenza ebhankini iinyanga (okanye ixesha elide ngokwaneleyo ukuba bafumane iiposta ezishicilelweyo naye) nokuba angakulungela ukwenza olu phando lomntu Umntwana wenziwe ngaphantsi kweveki edlulileyo.
Kwaye i-FBI ikwabamba abantu beQuigley kuba beme ecaleni kwakhe, ekungafunekanga ukuba ibe sisizathu esaneleyo sokubamba umntu. Ngokwenyani, abanalo nofifi lokuba ngoobani abo bantu.
Kwakhona, akukho nto ikhankanyiweyo ukuba eli ligwetywe lasinda uQuigley weba imali kwasekuqaleni. Bakrokrela nje loo mlinganiswa weMacintosh.
Kwaye emva koko oku kuyenzeka NGAPHAMBI!
Oku akufani nokukhulu apho umfazi acinga ukuba uncamisa indoda esele ikhulile. Eli lixhegwazana elikhulileyo, iarhente yeFBI, egcwele umlomo ngokwanga umntwana oneminyaka eli-12 ubudala onxulumene nophando lwakhe. Ilunge njani le nto KUYO YONKE INDAWO? NDISAQHUTYELWA PHANTSI.
Kwaye unayo. U-Preston uphelelwe yimali kwaye ubuyela apho aqala khona, uQuigley uya kuthi akhululwe eluvalelweni xa beqonda ukuba ayinguye Mnu Macintosh, kwaye i-FBI iya kubandakanyeka kwisikhalazo esikhulu sokungakwazi ukusebenza kakuhle. Kwaye umntwana wenza kunye nenenekazi elikhulile.
Ewe, ngoku umntwana wayedlala uPreston uqhubeka nokubanjwa ngenxa ye-DUI kunye nokuhlaselwa.
I-COO yangaphambili ye-Yahoo ikhetha i-Soho Pad eyi- $ 6.28M
Ukuvuna iGazi kwiiNtambo zeMbumba zeNtsana kunokunceda ukuguqula ukuguga
'Isikhokelo sokuGqibela seSiphelo se'Gotham': Ding Dong Intlanzi ifile
I-LA yooMkhosi oonomathotholo uJohn noKen bamisiwe ngenxa yokubiza uWhitney Houston kwiCrack Ho
thenga ioyile ye-cbd kufutshane nam
o ukuba ndiyenzile
Yimalini match.com ngenyanga
Ukwehla kwesisindo esongezelelweyo esisebenzayo
ipilisi etshisa amanqatha esisu
Eyona cbd yoxinzelelo lwenja
Imvelaphi yolwaphulo-mthetho yasimahla ekhangela kwi-intanethi